Sandblasting Media Market saizi vanotarisirwa kusvika USD mamiriyoni 441,9 ne 2023 - China Shanghai Bosun hasha
Sandblasting Media Market saizi vanotarisirwa kusvika USD mamiriyoni 441,9 ne 2023
Sandblasting Media Market saizi iri taitarisira kukura pa 6,5% CAGR kubva 2016 kusvika 2023. Global sandblasting nhau musika saizi, bhuku nemashoko, iri kukura panguva pasi 6% CAGR. US sandblasting musika zvenhau saizi iri kusapfuudza USD mamiriyoni 96 ne 2023.
Robotic nenyunje hurongwa vari kuramba kushandisa kuti kuwedzera kukura kwebasa sandblasting nhau musika kukura munzvimbo yepamusoro kudzora zvavanoda kwete kuvaringana ne kwezvipimo kushandisa michina mhinduro. Industries kusanganisira Aerospace, motokari, zvokurapa uye nevatengi zvemagetsi kushandisa michina iyi kuitira mafomu anoverengeka kusanganisira nokubviswa zvinhu, kushushikana zororo, chakuvhuvhu kuchenesa, kugadzirira pemvura, unhani kubviswa uye bara peening.
Opsioneel zvinhu akapa akadai servo kudzorwa muhombe positioner, zvoga nhau aibuda kuzvidzora, otomatiki kwebhosvo kufurirwa kuzvidzora, muhombe mapfumo marefu nezvaanogona, tsika Data muunganidzwa, mushumo zera, otomatiki kupora chinowanzoitika kutyaira kudiwa. US sandblasting musika nhau saizi kunotarisirwa pfuura USD mamiriyoni 96 ne 2023.
Sandblasting nhau pamusika zvikumbiro zvinosanganisira kushandisa abrasives kudimbura, roughen, mvere, zvakachena kana chiPolish hukawanika, kana kubvisa zvinhu yokugadziridza pamusoro kukura kana maumbirwo. Uyezve, izvi hasha nezvimedu dziri kushandiswa Coated uye waakaita nezvimiro nokuda mafomu anoverengeka kusanganisira makorari, nokuveza, pamusoro kupedzisa, uye kukuya. Industries akadai kuvakwa, motokari, Aerospace uye mumaindasitiri ndizvo zvikuru mugumo-kushandisa nzvimbo.
nzwisiso Key nomushumo dzinosanganisira:
Aluminum oxide hasha nenyunje musika chakaita kuti anopfuura 10% of bhizimisi mugove muna 2015 uye kunotarisirwa kukura pa 7.2% CAGR kubva 2016 kusvika 2023. Zvinonzi Zvinosarudzwa kuti kushandiswa mafomu umo imwe pamusoro kumugumo kunodiwa kuti anoruramisa imwe mari.
Steel pena uye chakava norukangarabwe vanotarisirwa vawane dzinokosha indasitiri mugove kubva 2016 kusvika 2023 nokuda zvakawanda kushandiswa mune mhepo rokuchenesa nemauto nekuda kubviswa paguyo scale, uye kupenda uye ngura kubva simbi hukawanika.
Silica sandblasting zvenhau musika mugove akatonga manwiro pose 2015. kwokudiwa iyi kunonyanya zvinobva Asia Pacific, apo mashoko anowana zvakawanda kushandiswa nokuda kusavapo yemirau zvakafanana avo kuona munyika anokosha European, uyewo nechepazasi mutengo pfungwa zvichienzaniswa dzimwe zvokuvakisa.
Asia Pacific sandblasting musika nhau mugove mutariri 45% muna 2015. Rinokosha Zvinokosha zvakaisvonaka zvinhu kwemauto uye richikura kwezvivako mari akanaka nokuda nharaunda.
Post nguva: Aug-15-2016